Boudha Branch press release
काठमाण्डौं, फागुन १८, २०६६ । सनराइज बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको प्रमुख धार्मिक तथा व्यापारिक स्थल बौद्घमा आफ्नो २७ औं शाखा बिस्तार सगैं बैंकिङ्ग कारोबार शुरु गरेको छ । मुलुककै ठूला एवं साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय रहदै आएको यस क्षेत्रमा बैंकले एउटा अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुका साथै बौद्घ वरपरका स्थानिय क्षेत्रमा साना एवं मझौला व्यवसाय पर््रबर्द्घन गर्नको लागी शाखा विस्तार गरिएको बैंकका महाप्रवन्धक श्री सुमन न्यौपानेले बताउनुभयो । बैंकले स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बैंकिङ्ग प्रणालीको विकासका साथै नयाँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंकको लक्ष्य रहेको पनि श्री न्यौपानेले बताउनुभयो । यस शाखाबाट अन्य शाखाहरुले प्रदान गर्ने जस्तै सम्पर्ूण्ा बैंकिङ्क सेवाहरु दिईने पनि बताईएको छ । बैंकले हालसम्ममा रु. १३ अर्ब ५६ करोड निक्षेप संकलन गरी रु. १२ अर्ब ४३ करोड कर्जा प्रवाह गरेको तथा २ अर्ब १० करोड लगानी गर्न सफल रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षो पुस महिनासम्ममा बैंकले रु. १५ करोड २२ लाख संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल रहेको छ । हाल बैंकका ३० वटा ए.टी.एम.हरु संचालनमा रहेका छन् ।